Marka aad tahay shaqo raadiye kana qayb-qaadato mid ka mid ah barnaamijyadayada waxaad lacag ka heli kartaa Qasnada Caymiska inta lagu jiro wakhtigan. Magdhabkan waxaa lagu magacaabaa taageerada hawsha ama magdhawga horumarka.
Sidee ayaan samaynayaa si aan u helo magdhab?
Marka lagaa diiwaan-geliyo mid ka mid ah barnaamijyadayada, waxaad magdhabid ka codsanaysaa Qasnada Caymiska. Waxaad codsanaysaa calaa bil oo ah ka dib. Waxaa ugu sahlan in laga codsado bogga intarnatka ee Qasnada Caymiska. Halkan ayaad xitaa ka akhrisan kartaa dheeraad ku saabsan sida aad u codsanayso iyo goorta lacagtan la bixiyo.
Maxaa shuriud u ah in la helo magdhabid?
Marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij waa muhiim inaad raacdo qorshaha aad si wada-jir ah noola samaysay. Tani waxay tahay tusaale ahaan inaad u baahantahay ka qayb-qaadashada hawlaha aynu ku heshiinay. Waxaa kale oo aad u baahantahay inaad fir-fircoonaato oo raadsato shaqo haddii tani ku jirto qorshahaaga.
Waxaad u baahantay inaad samayso warbixinta hawlahaaga bil kastaba oo soo sheegto haddii aad xanuusato.
Lacag intee leeg ayaan anigu helayaa?
Marka aad ka qayb-qaadato barnaamij waxaad helaysaa lacag go'an calaa maalin ugu badnaan shan maalmood toddobaadkiiba. Waxaad lacag ku helaysaa maalin kasta oo aad ka qayb qaadato barnaamijkaaga.
Magdhawgaaga calaa maalin waxay ku xirantahay sida da'daada iyo haddii aad buuxisay shuruuda qasnada lacagta shaqo la'aanta ama aanad buuxin. Dhanka Qasnada Caymiska bogeeda intarnatka ayaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan intay leegtahay lacagta aad helaysaa.
Goorma ayaa la bixiyaa lacagtan?
Qasnada Caymiska waxay bixisaa lacagtan 26-ka bil kasta. Si aad u hesho lacagtaada 26-ka waa khasab in Qasnada Caymiska ay hesho codsigaaga ugu dambeyn 7-da bil kastaba.
Haddii aad codsato ka dib 7-da waxaa magdhabkaaga la bixinayaa ugu horeyn 26-ka bisha ku xigta. Haddii aanad codsan ka hor intaan bishu dhamaan waxaad khatar ugu jirtaa inaad gebi ahaanba noqoto bilaa magdhabid bishii ka horeysay.
Maxaa dhaca haddii aan anigu xanuusado?
Haddii aad xanuunsatid waxaa muhiim ah in aad taas noo soo sheegtid horbaba maalinta ugu horreysa ee aad xanuunsatid. Haddii kale waxaad waayi kartaa magdhabkaaga xilliga aad markaasi xanuusanaysid. Si aad lacagtaada u sii qaadatid maalinta toddobaad ee xanuunka ka dib waxaad u baahantahay in aad noo keentid caddeyn dhakhtar oo muujineysa in aadan barnaamijka ka qeyb qaadan karin.
Maxaa dhaca haddii ilmahaygu xanuusado?
Haddii aad u baahantahay inaad guriga joogto si aad u hayso ilmo xanuusaday, waa muhiim inaad nala soo xiriirto isla maalinta ugu horeysa.
Haddii aad daryeelayso ilmo xanuusanaya
Maxaan samaynayaa haddii aan u baahanahay inaan ahaado fasax?
Haddii aad u baahantahay inaad fasax ahaato waa khasab inaad marka hore naga hesho oggolaansho.
Miyaan shaqayn karaa oo isla markaana ka qayb qaadan karaa barnaami oo helayaa magdhabid?
Haa, waad shaqayn kartaa marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij. Laakiin magdhabkaaga wuxuu la yaraanayaa lacag u dhiganta ta aad u hesho mushaaro ahaan. Waa Qasnada Caymiska kuwa sameeya xisaabintan.
Miyaan heli karaa gunada waalidka isla wakhtiga aan helo magdhabka?
Haa, waad heli kartaa gunada waalidka marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij. Laakiin magdhabkaaga wuxuu la yaraanayaa lacag u dhiganta ta aad u guno waalid ahaan.
Loogu talogalay adigaaga ka qayb-qaata qorshaha dagnaanshaha
Haddii aad ka qayb-qaadato qorshaha dagnaanshaha waxaad heli kartaa magdhawga maalmeed iyo xitaa wixi ah magdhawga kirada ama ku kordhinta barnaamijka dagnaanshaha. Akhri shuruudaha ku saabsan nooca magdhawga aad xaqa u leedahay.
Digniin ama in la waayo lacagta la qaato
Haddii aad raaci waydo shuruudaha loogu talogalay magdhawga waxaad heli kartaa digniin, ama waayi kartaa magdhawgaaga xilli ah maalin ama dhowr maalmood.
Digniin iyo waayida magdhawga laga helo Qasnada Caymiska